Innocence | Sahaja yoga in Madagascar
SAHAJA YOGA – FAHALALANA MADIO
Posted by benirastro in chakras, L'Esprit, Sahaja yoga.	Tagged: Aarti, Andro fito, Connaissance, Connaissance pure, Création, Fandresena, Ganapati, Ganesha, Innocence, Kundalini, Lord, Lord Ganesha, Mooladhara chakra, Négativité, Parvati, Sahaja yoga, Shri Ganesh.	1 comment
Cliquez sur l’image ou les liens pour voir la vidéo, s’il vous plâit.
TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA
Ary aza mitondra anay amin’ny fakam-panahy,
Ary ny voninahitra mandrakizay.
MAMONO NY FINOANA NY TAHOTRA
« Aiza isika ankehitriny ? Olona voa-tsodranon’ny hery rehetra isika. Voa-tsodrano isika, nefa tsy vonona ny hampiatra ireo hery ireo isika, tsy te hahalala ireo hery anananantsika ireo isika. Matahotra ny amin’ireo zanatsika ireo isika, miasa-saina amin’ny « sari » (akanjo) izay tokony hanaovantsika, miasa saina amin’ny hoe iza no mpandrindra (coordinateur) ary miasa saina ny amin’ny tokony hanaovantsika ny mpitondra. Tsy hanampy antsika mihitsy izany rehetra izany. Tsy izany no hahatongavanareo eto ! Mba miezaha manaka-davitra. Tonga eto ianareo mba ho Fanahy ary hizara ny hazavan’ny Fanahy. Tsy misy dikany ny zavatra hafa !
Ho gaga ianareo amin’ny fiasan’ny finoanareo, raha vao manomboka fantatrareo izany. Tsy finoana jamba. Tsy tokony horesahanareo akory izany, mandeha io.
Mety ho azonareo, anatin’ny andro vitsy, ny zavatra maro izay nirinareo hatramin’izay, tsy zavatra materialy, tsy zavatra maniditsidina (surperficiels), na dia mety ho azonareo aza izany fa resaka fitoerana. Ohatra, misy olona iray te hanokana ny fiainany manontolo, ho an’ny Sahaja Yoga. Inona ary no atao ? Inona no ataonareo mba hahatontosa izany ?
Ny zavatra voalohany dia mikasika ny finoanareo. Mila fantarinareo mino zavatra iray ve ianareo ? Tena mino io zavatra io ve ianareo sa tsia ?… Ny finoana dia io fahafantaranareo azy io. Efa hitanareo ny sariko, resy lahatra ianareo mikasika izany, nefa tsy misy tokony haharesy lahatra anareo ny amin’izany ! Nefa, ny finoanareo dia tsy miray amin’ny fonareo. Tsy aminareo izy, ao ivelanareo izy ».
Shri Mataji Nirmala Devi- Navaratri puja – Cabella, Italie – 24/10/1993
FAHADIOVAN’NY SAHAJA YOGA
“…Raha vao tonga ato amin’ny Sahaja Yoga ianao dia tsy afaka miala amin’ny làlan’ny Dharma. Raha mikasa hanao izany ianao dia mivoaka ny Sahaja Yoga. Zavatra tsotra tahaka izany. Tsy hoe akory, “Tena tsara, tsy misy dikany izany, avelan’i Neny foana izany” ary ireo zavatra ireo. Mamela aho, marina izany, satria mbola manana ireo fahalemena amin’ny maha-olombelona tavela ao aminareo, avelako ianareo.
Fa ao anatin’ny Sahaja Yoga, tsy azonareo atao izany. Mila mitazona ny fahadiovany ny Sahaja Yoga ary raha tsy mitoetra ao izany dia hanomboka hanao ito na hiteny hoe : “Aorian’izany, hitanareo, isika koa dia Sahaja Yogis, ry zareo koa Sahaja Yogis, nataon’izy ireo izany, ka maninona no tsy isika…”
Shri Mataji Nirmala Devi- Puja Taom-baovao – Kalwe- India – 1998-12-31
IREO ANDRO FITO
« Androany, zavatra iray tsy manantsahala no tonga. Hatsaram-bitana lehibe ho an’ny Sahaja Yogis ao Aostralia, tsy mbola nankalazaina ity andro ity hatriz’izay nisian’ny Sahaja Yoga.
Androany, no taom-baovao ho an’ny Sahaja Yogis, satria io no taom-baovaon’ny kalendrie-ny Shalivan. Araka ny efa fantatrareo, nidina avy any amin’ny dinastia-ny mpanjaka Shalivahan Aho. Nantsoina hoe Shalivan izy ireo satria nitondra samboady (chale) izay famantarana ny Andriananahary (Déesse), nantsoina izy ireo hoe mpitondra samboady (porteurs du châle) satria tahaka anareo izay mitondra samboady matetika. Koa nantsoina izy ireo hoe Shalivahan.
Noho izany, ny taom-baovao dia ny andro voalohany amin’ny fahatongavan’ny Andriananahary. Misy andro sivy izy io. Tamin’ny fotoana hafa tany, Satya Yuga, avy eo Dvapara, Treta, Kali Yuga. Misy vanim-potoana (Yugas) efatra. Teraka tamin’ny fotoana roa ny Andriananahary, “yugas” : talohan’ny Satya Yuga ary ny manaraka izany.
Noho izany, androany, izao no andro hanamarihana ny andro voalohany ny nahatongavany teto an-tany. Andron’ny Gauri koa izy ity, satria ny Virijiny no endrika voalohan’ny Andriananahary. Noforoniny tamin’io andro talata, fiantombohan’ny herinandro, io koa I Ganesha. Inona moa ny andro androany ? Androany.
Sahaja Yogini : Androany, andro fahafito. Sabotsy, Neny. Sabotsy.
Shri Mataji : Sabotsy.
Niresaka tamin’ny olona izay naka sary i Shri Mataji.
Ankehitriny. Tapitra izany ankehitriny. Androany, aza mijanona, mazava ? Rehefa miresaka aminareo Aho, tsy tokony haka sary ahy ianareo. Tena hevitra ratsy izany, satria manelingelina Ahy. Akoantr’izany, hitanareo, rehefa raisinareo ny sariko nefa izaho mitafa aminareo, Hitako matetika, somary hafahafa ireo sary ireo. Tsara kokoa raha amin’ny fotoana tsy hiresahako no hakanareo sary Ahy. Hitanareo, satria rehefa misy feo mivoaka amin’ny fakantsary, voakotaba ny olon-drehetra ary tsy mitoetra ny fiambenana (attention) hitanareo. Zavatra tena manan-danja izany resahiko aminareo izany, Ekena ? Izao, aza maka sary, azafady. Alefaso any amin’ny zavatra ambarako ny fiambenananareo.
Miteny amin’ny fiteny hindi I Shri Mataji.
Noho izany, ny andro talata no andro nanamboarana an’i Shri Ganesha, avy eo ny Andriananahary vao nanomboka ny asa.
NY andro izay nanombohany ny asa, dia alarobia. Nanomboka ny asa Izy ny alarobia. Andron’ny fiasana (action). Izany no antony nanombohany ny asa tamin’ny andro alarobia.
Androany, amin’izao zava-misy izao, sabotsy isika izao, fa Izaho dia miresaka aminareo ny filaharam-potoana (timing) voalohany, satria ny alarobia no andron’ny Swaddhisthan, andro izay nanombohany nametraka izao rehetra izao.
Ary voalohany indrindra, ny talata no andro voalohany amin’ny Sahaja Yoga, ny alarobia no faharoa. Ary ho gaga ianareo raha mahita fa ireo kintana, araka ny fomba fijery (même mode), satria ny talata no andron’ny Marsa ozay itoeran’i Shri Ganesha. Ny alarobia no andron’ny Merkiora, Merkiora no chakra-ny Swadhisthan.
Ny andro fahatelo. Eny, alakamisy, io no andron’ny jopitera : io ilay antsoinareo, antsointsika hoe Guru, io no andron’ny Guru. Jopitera no mpampianatra.
Ny zoma, no andron’i Andriananahary, hitanareo ihany koa ny chakra’i Andriananahary, ny tany, renin’izao tontolo izao (univers), Venosy izany. Fa amin’ny sanskrit, ny anaran’ireo andro ireo dia mitovy tsy misy valaka.
Mifandraika amin’ireo kintana izy ireo.
Manarak’izany, ny sabotsy no andron’i Krishna. Shani no satorna.
Avy eo ny alahady izay andron’i Kritsy, ny masoandro.
Ny alatsinainy no andron’ny Sadashiva, an’ny Fahatanterahana ara-panahy, ny firindrana tanteraka (intégration). Ireo no andro fito namoronan’Andriamanitra izao tontolo izao.
Izany no nambarako omaly, fa amin’io làlana tery io, tsy ho azonareo mihitsy ny kristianisma. Mihevitra ianareo fa adalana ny filazana fa noforonina tanatin’ny andro fito izao rehetra izao, kanefa tsy izany velively no zava-misy.
Rehefa mamaky zavatra hafa, soratra (écritures) hafa, ianareo vao hahalala ny zavatra nambaran’i Kristy.”
Ny volana dia mifandraika hatry ny ela tamin’ny Andriananahary. Izany hoe Andriananahary izay voalaza amin’ny ila havia (canal gauche), ilay antsoina ihany koa hoe Ida nadi na làlan’ny volana, izay manambara ny fihetseham-po ary ny toetra (aspect) vavy ao aminareo.
Fa ny alatsinainy kosa dia mifandraik amin’ny chakra-ny Sahasrara, izay an’ny firaisana amin’ny « cosmos » ary i Andriamanitra. Izany no ilazana fa ny alatsinainy dia andron’ny Sadashiva, ilay Andriamanitra lahy amin’ny mpamorona mivady (Sadashiva/Adi Shakti). Plotona no mifandraika amin’ny Adi Shakti.
Raha te hamaky ny lesona amin’ny teny frantsay : Les jours de la semaine
Tsy mifanalavitra amin’ny fampianarana Sahaja Yoga mihitsy ny andro Malagasy. Ohatra, amin’izany ny filazana ny andron’ny Shri Lakshmi izay alamisy no filaza azy. Io no andron’ny mpampianatra, vola, dia lavitra, ny fitaovam-pitaterana … sns amin’ny fanandroana.
L’initié qui souhaite,
Pendant plusieurs vies, de richesse et d’amour,
Doit saluer avec sa tête,
Le Seigneur Ganapathi qui est le fils de Shri Parvati.
Ny mpikaroka izay maniry,
Mandritry ny fiainana, harena, fitiavana,
Dia tokony hidera ao tampon-dohany,
Ny Tompo Ganapathi izay zanaka lahin’i Shri Parvati
Premièrement, pensez à lui comme Dieu avec la défense cassée,
En second lieu en tant que Dieu avec une défense,
Troisièmement en tant que celui avec les yeux noirs rougeâtres,
Quatrièmement en tant que celui qui a le visage d’un éléphant.
Voalohany indrindra, hevero ho toy ny Andriamanitra manam-piarovana rava izy,
Faharoa, tahaka ny Andriamanitra manana fiarovana,
Fahatelo, sahala amin’ny mana-maso miloko mainty mena,
Fahaefatra, Izy ilay manana endrika elefanta.
Cinquièmement en tant que celui qui a une panse très large,
Sixièmement en tant que celui qui est cruel avec ses ennemis,
Septièmement en tant que celui qui est un enleveur de tous les obstacles,
Huitièmement en tant que celui qui est de la couleur de la fumée.
Fahadimy, ilay manan-kibo tena lehibe,
Faha-enina, ilay tsy mihantra ny fahavalony,
Fahafito, ilay mpanala ny sakana rehetra,
Fahavalo, ilay maka ny lokon’ny setroka.
Neuvièmement en tant que celui qui en croissant sur son front,
Dixièmement en tant que celui qui est le chef des destructeurs des obstacles,
Onzièmement en tant que chef de l’armée du Seigneur Shiva,
Et douzièmement en tant que celui qui a le visage d’un éléphant.
Fahasivy, ilay misandratra eo amin’ny handriny.
Fahafolo, ilay lehiben’ny mpandrava ireo olana rehetra,
Faha iraika ambin’ny folo, ilay lehiben’ny miaramilan’i Shri Shiva,
Ary faha roa ambin’ny folo, ilay manana endrika elefanta.
Celui qui lira ces douze noms,
À l’aube, au midi et au crépuscule,
N’aura jamais peur de la défaite,
Et réaliserait toujours ce qu’il désire.
Izay mamaky ireo anarana roa ambin’ny folo ireo,
Ny maraina, ny antoandro ary ny hariva,
Dia tsy hatahotra ny faharesena,
Fa hahatontosa izay rehetra tadiaviny.
Celui qui poursuit ses études obtiendra la connaissance,
Celui qui veut gagner l’argent obtiendra l’argent,
Celui qui souhaite un fils, obtiendra un fils,
Et celui qui veut le salut obtiendra le salut.
Ny mpianatra, hitombo sy hanam-pahalalana,
Izay maniry vola, hahazo vola,
Izay maniry anaka, hahazo zaza,
Izay mitady fitahiana dia hotahiana.
Les résultats de cette prière,
De Ganapathi sera obtenu dans les six mois,
Et dans une année, il obtiendrait tous les souhaits accomplis,
Et il n’y a aucun doute à ce sujet.
Ireo valin’ity vavaka,
Atao amin’i Ganapathi ity dia ho azo anatin’ny enim-bolana,
Ary ao anatin’ny herin-taona dia ho azony avokoa izay nangatahany,
Tsy misy ahiana ny amin’izany.
Celui qui obtient cette prière,
Écrite par les huit Brahmanas,
Et l’offre au seigneur Ganesha,
Deviendra bien informé,
Et sera béni avec toutes les qualités stellaires,
Par la grace de seigneur Ganesha.
Izay mahazo ity vavaka,
Nosoratan’ireo Brahamanas valo ity,
Ka manolotra izany ho an’I Shri Ganesha,
Ho tahian’ireo toetra tsara eny an-hakabakaka,
Noho ny fahatsoran’I Shri Ganesha.
Thus ends the prayer to Ganesha from Narada Purana which would destroy all sorrows.
Finit ainsi la prière à Ganesha extraite de Narada Purana qui détruirait toutes les douleurs.
Tapetra eto ary ny vavaka atao amin’I Shri Ganesha tao amin’ny Narada Purana izay mamotika ny fahoriana rehetra.
Shri Mataji – 03 nov 1987 tao Paris-sous titre Malagasy
Posted by benirastro in Sahaja yoga.	Tagged: Innocence, L'Esprit, Madagascar, Malagasy, Malagasy subtitle, Pouvoir innoncence, Programme public - Sahaja yoga Atananarivo, Sahaja yoga, Sahaja Yoga Programme public, Shri Mataji, spiritualité, yoga madag.	Leave a comment